Peeji nke emelitere, Onu Ogugu na Isi okwu na nchekwa na mmelite arụmọrụ | Esi m mac
Peeji nke emelitere, Onu Ogugu na Isi okwu na nchedo na arụmọrụ
Kemgbe ụnyaahụ ọ dị maka nbudata, a mmelite nke Peeji, Onu ogugu, na Isi Okwu. Otu n'ime ngwa Apple dị mkpa maka ederede, akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ ngosi. Agobọchị gara aga, anyị gwara gị nke ahụ ngwa atọ ahụ ghọrọ n'efu. Ọ bụ otu nzọ ọzọ na akụkụ Apple na ngwa ndị mejupụtara MacO, nke mere na anyị nwere 100% arụmọrụ sistemụ anyị oge niile, ihe niile n'ọnọdụ ọ bụla. Dị emelitere bụ ụdị 6.1.1. maka Peeji, 4.1.1. onu ogugu na 7.1.1. n'ihe banyere Keynote.
Na ụkpụrụ ị naghị enweta ozi dị mkpa, naanị nche na arụmọrụ ndozi , mana ụlọ ọrụ ahụ nwere ekele maka ya iji nyochaa ma melite ngwanrọ nke nwere ike iyi ihe nke abụọ, n'azụ Microsoft Office pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ ezie na na Soy de Mac n'ọtụtụ oge, anyị ekwuola banyere njirimara magburu onwe ya nke ngwa atọ ahụ, nke maka 80% -90% nke ndị ọrụ na-egbo mkpa anyị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị achọpụta mgbanwe ọ bụla dị mkpa na ngwa ahụ, anyị ga-ekwu ngwa ngwa banyere ya na Soy de Mac.
Ikpeazụ isi update nke Peeji, Onu ogugu, na Isi Okwu O wetara, na mgbakwunye na obere mmelite, ohere nke ịrụ ọrụ na ntanetị n'otu akwụkwọ ahụ n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ. Eziokwu, ọ bụrụ na ịnwalebeghị ọrụ a, ana m akwado ka gị na onye otu ezinụlọ ma ọ bụ enyi gị mee ule ahụ. O yiri ka ọ fọrọ nke nta ka Ime Anwansi mgbe emezigharị ụfọdụ, na-egosi onye na-enye onyinye a yana ozugbo. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọnwa Machị gara aga emelitere ngwa atọ a, nke ihe ọhụụ kachasị dị egwu na-akpọghe faịlụ na Touch ID nke ọhụrụ MacBook Pro.
Iji budata ụdị ọhụrụ ahụ, ị ​​ga-aga Mac Store Store wee pịa akara ngosi ikpeazụ na akara elu nke na-egosi mmelite. Site na ịpị na ya, ị kwesịrị ịnwe nsụgharị ọhụrụ dị maka nbudata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Peeji nke emelitere, Onu Ogugu na Isi okwu na nchedo na arụmọrụ
Universal Kit, Disk Space na PDF na Okwu Ihe Ntụgharị, ugbu a na-ere maka Mac
Etu esi zipu ozi-e site na izipu ozi Mail